Sababo la xiriira arrimaha deegaanka, PCB Wonderful siisaa waxyaabaha PCB iyo adeegyada shirka PCB waafaqsan xeerarka RoHS u baahan fiirsashada adag of 6 walxaha halista ah oo ay ku jiraan Lead (mawqif), Meerkuriga (Hg), Cadmium (CD), sun Chromium (CR VI), Polybrominated Biphenyls (Pbb) iyo Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) in wax soo saarka ee alaabta elektaroonikada ah iyo korontada. Waxaa ka mid ah lix nooc oo walxaha, lead waa ugu ballaaran codsatay maxaa yeelay waxa ay door aasaasi ah oo muhiim ah dahaadhay electronic. Sidaa darteed, xal hogaanka-free waa daawada fiicnayn maxaa yeelay, ururkii RoHS-socon PCB.
Guud ahaan, wax soo saarka free hogaanka ugu horrayn imanaya technology Alxan hogaanka-xor ah oo keeni-free qaybaha iyo qalabka.
Sida saaraha hogaanka-free PCB ah, PCB Wonderful faa'idaysanayo of technology kubada Alxan formation, electro dahaadhay technology, technology seylaha Alxan iyo foosto technology dahaadhay kuwaas oo dhammaantood ka tirsan qoyska of technology Alxan hogaanka-free. teknoolajiyada Alxan Kuwani loo xaqiijiyo awoodooda our kordhay si guul leh dhibaatooyinka, whiskers daasadda tusaale ahaan, in uu saameyn ku sugnaanta waxyaabaha iyo si ay u hirgeliyaan gool dusha hogaanka-free sida HASL, ENIG, ImAg, iwm on PCBs iyo PCBAs ka qabtaan.
Intaas waxaa sii dheer, waa muhiimadda badan in ay doortaan alaabta hogaanka-free in ay yihiin awood u Riiqdeediina heerkulka sare bedelka ee wax Alxan dhaqanka. Waxaa intaa dheer, ka daadanayo in Alxan hogaanka-free waa in ay wax badan ka badan firfircoon ka badan ka daadanayo rosin in Alxan caadiga.
Intaa waxaa dheer, qaybaha ku lugta leh shirka PCB hogaanka-free u leeyihiin in ay buuxiyaan shuruudaha loogu talagalay hogaanka-free xisaabaadka waafaqsan for halaynta iyo ku habboonaanta alaabta final. Ugu wacan tahay in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ee arimahan, PCB Wonderful ayaa la hayo sida muddo-dheer iyo xiriirka iskaashiga saaxiibtinimo ee u dhexeeya saarayaasha qayb caan ah oo qaybiya oo dunida dacaladeeda ah in aannu dib u awood u leh iibinta qaybaha hogaanka-free tayo sare leh oo loogu talagalay macaamiisha our buuxiyey iyadoo arrimaha deegaanka.
Waxaad dooran kartaa doorasho dusha dhameysatay hogaanka-free by gaaray waxyaabaha u dhiganta our webpage Quote PCB on. Waayo, shuruudaha dheeraad ah oo ku saabsan xal hogaanka-free, si xor ah u helno dhex wonderful@wonderfulpcb.com by email.